बिद्यानास्… यसरी सुन्दर हुनेछ रानीपोखरी – बाह्रथरी कुरा
यतिबेला रानीपोखरीको पुनर्निर्माणलाई लिएर ठुलो बहश छेडिएको छ काठमाडौं खाल्डोमा। सिमेन्टको प्रयोग गरेर रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्नु मौलिक संस्कृतिमाथि धावाको हो भनि दाबी गरिरहेका छन् केही मान्छेहरु। उता काठमाडौंका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्य भने रानीपोखरीलाई आधुनिक पोखरी बनाएर कफी बेच्ने योजना सुनाइरहनुभको छ। यस्तोमा १२ थरीजस्तो जिम्मेवार हावा छेकुवा ब्लग चुपचाप बस्न सुहाउने कुरै भएन। त्यसैले रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्बन्धमा हाम्रो धारणा र योजना के छ भन्नेबारे हामी आज स्पष्ट पार्न चाहान्छौं। अत: आदरणीय पाठकवृन्दलाई कार्यक्रम शुरु गर्नुअघि आआफ्नो स्थानमा सीट बेल्ट वा कम्बर बेल्ट बाँधेर आसनग्रहण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं।
सबैभन्दा पहिला, १२ थरी टीम काठमाडौंका मेयरको आधुनिक रानीपोखरी बनाउने विचारसँग शतप्रतिशत सहमत छ । अझ एककदम अघि बढेर १२ थरी थप्न चाहन्छ – रानीपोखरीलाई वातावरण अभियन्ताले आरोप लाउने गरेको स्विमिङ पुल जस्तो मात्र होइन, यसँसँग जोडेर अत्याधुनिक कम्प्लेक्सको निर्माण गर्नुपर्छ। राणा शासन, पन्चायत, प्रजातन्त्र हुँदै हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गैसक्यौं। चुनावमा स्पष्ट बहुमत ल्याएर हामी आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने युगमा प्रवेश गरिसक्यौं। तर, अझै पनि हामी भन्दैछौं, पुराना कुरा जगेर्ना गरौं, रानीपोखरी संरक्षण गरौं, हेरिेटेज साइट नबिगारौं। ताइँ न तुइँ, हात लायो दुई जस्ता पाङ्ग्रे रोदन। के हुन्छ हेरिटेज जोगाएर? खान दिन्छ? लौ रानीपोखरी पहिलाकै अवस्थामा पुर्‍याइयो रे, के गर्छ त्यसले? रत्नपार्कमा लाइन बसेर माइक्रो कुरेका बेला तिर्खा लागे त्यो पोखरीको पानी पिउन पाइन्छ? अहँ… पाइन्नँ। तर मेयरसापको योजनामा साथ दिने हो भने बकाइदा कफी पिउन पाइन्छ। आउनुस्, अब बुँदागत रुपमा हाम्रा धतुरे योजना झेल्नुस् !
फोटो: ट्राभलफोटो डट नेट
फोटो स्रोत: ई-आर्किटेक
हामीले वाद र तन्त्रमा व्यापक परिक्षण गरिभ्याइसक्यौं। अबको पालो हो भौतिक निर्माणको ! अंग्रेजीमा भन्छन् नि इन्फास्ट्रक्चर। हाम्रो योजना रानीपोखरीलाई सिमेन्टेड गरेर पानी जम्मा गर्नेमा मात्र सिमित छैन। त्यसमा एउटा अत्याधुनिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुपर्छ। बीचमा पोखरी नै हुनेछ तर त्यो अहिले फलामले घेरेको जुन क्षेत्र छ त्यसमा फनफनी घुमेको १० तले कम्प्लेक्स हुनेछ। हुन त हाम्रो अनुपम परिकल्पना अनुसारको फोटो गुगलेश्वर महादेवले पनि भेटाउन सकेनन्। तर अलिअलि यो साइडको फोटोले भने पारा ल्यायो है। डिएनएको Double Helix स्वरुप कल्पना गर्न सक्नुन्छ भने तेस्तै… तर निकै ठूलो। भोलि नेस्नल जियोग्राफीले एउटा एपिसोड नै बनाओस्, मेगास्ट्रक्चर भन्ने सिरिजको लागि।
यस्तो तिलस्मी कम्पलेक्सको ‘शोपिस’ हुनेछ र त्यसको पनि ‘स्पटलाइट’ हुनेछ टलटल टल्किने अत्याधुनिक बत्ती जडान गरिएको बालगोपालेश्वरको मन्दिर। यस कम्पलेक्सको १० औं तलासम्म सिँढी हुनेछैनन्, तर गोलो घुमेको बाटो हुनेछ बरण्डाजस्तो निस्किएको। १० तला हिँडेरै चढ्न गाह्रो हुनेहरुका लागि भवनको बीचमा पारदर्शी शिशा भएको एलिभेटर हुनेछ जहाँबाट भवन तथा पोखरीको दृश्यपान गर्न सकिनेछ। भवनको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा नेपाली, चाइनिज, अमेरिकन, इटालियन, कन्टिनेन्टल लगायत विश्वभरीका खाना पाउने फुड कोर्ट हुनेछन्। हरेक रेष्टुराँको डिजाइन यसरी गरिनेछ कि जहाँ बसेर नि पोखरीको दृश्यको रसस्वादन गर्न पाइयोस्।
अत्याधुनिक कफी पसल
यो कम्प्लेक्सको पहिलो तल्लामा अत्याधुनिक कफी पसल हुनेछन्। एक छेउमा कफी बँगैचा नै हुनेछ। कफी पिउन जानेहरुले कफी बँगैचाको आनन्द सिँत्तैमा लिन पाउनेछन्। कफी पसल किन चाहियो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। हेर्नुस्, रत्नपार्क काठमाडौंको हब हो। त्यहाँ हरेक नेपाली जम्मा हुन्छन्। त्यहीँबाट उपत्यकाभरीका माइक्रो, बसहरु चल्छन्। ती बस, माइक्रो चढ्न लाइन बस्नुपर्छ। लाइनमा बस्दा तिर्खा लाग्ला, भोक लाग्ला? अनि त्योबेला के गर्ने? पहिलेको जस्तै बँगैचावाला रानीपोखरी बनाएर के गर्ने? तिर्खा लाग्दा त्यो पोखरीको पानी पिउने? भोक लाग्दा त्यो पोखरीका माछा खाने? मिल्दैन नि। त्यसैले त्यहाँ अत्याधुनिक कफी पसल बनाउने। खै रत्नपार्क, रानीपोखरी आसपासमा कफी पसल? कि त जमल पुग्नुपरो त्यो विश्वज्योति हो कि के मल, कि त यता काठमाडौं मल।
बृहद रानीपोखरी क्षेत्र
अब हामीले रानीपोखरी भनेर त्यही बिचमा एउटा पोखरी बनाउने होइन। रानीपोखरीलाई अब बृहद बनाउनुपर्छ। दरबार हाइस्कुल, त्रिचन्द्र क्याम्पस, घण्टाघर, शहिद गेट, टुँडिखेल, खुलामञ्चसम्मको क्षेत्रलाई अब बृहद रानीपोखरी क्षेत्रमा राख्नुपर्छ। यो बृहद क्षेत्रमा बढीमा ७ तले भवन लाइन मिलाएर बनाउने। सबै भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ् हुनेछन्। त्यो घण्टाघर छुट्टै आवश्यक छैन। रानीपोखरी कम्प्लेक्सको माथि एउटा गजुरको निर्माण गरेर त्यसैमा घडी राखिनेछ। यो क्षेत्रमा गाडीहरु सबै अण्डरपासबाट गुड्नेछन्। पर्यटकका निम्ति ४ लेनका सडक बराबर चौडाइका पदमार्ग हुनेछन् तर सबै ढुंगा बिच्छ्याइएका। त्रिचन्द्र कलेज, जमल, दरबार हाइस्कूल, शहिद गेट, पुरानो बसपार्क, टुँडिखेललाई पुरै अत्याधुनिक बनाइने छ।
अहिलेको टुँडिखेललाई अत्याधुनिक रंगशालामा परिणत गरिनेछ। नेपाली सेनाले परेड खेल्नको लागि सानो ठाउँ उपलब्ध गराइनेछ, थानकोट छेउछाउमा। टुँडिखेलमा ‘डे नाइट म्याच’ खेलाउन सकिने क्रिकेट र फूटबल मैदान निर्माण गरिनेछ। यो मैदानको वरिपरि दुईवटा व्यापारिक कम्प्लेक्स र बहुराष्ट्रिय ५ तारे होटलको निर्माण गरिनेछ। ती व्यापारिक कम्प्लेक्समा प्राडा, गुच्ची, लुइ भुइटन, एप्पल, सामसङ, एडिडास, नर्थ फेस, ग्याप जस्ता अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डहरुका आधिकारिक बिक्री केन्द्रहरु हुनेछन्। च्याम्पियन्स लिग, स्पेनिस लालिगा, एसेज सिरिज, भारत पाकिस्तान क्रिकेट जस्ता खेलहरु तटस्थ मैदानका रुपमा यी दुई मैदानमा खेलाइनेछन्।
रानीपोखरी मोनो रेल
बृहद रानीपोखरीको निर्माण गर्दा रेलको कुरा छुटाउनु मुर्खता हुनेछ। बृहद रानीपोखरी क्षेत्रमा एउटा छुट्टै मोनोरेल चलाइनेछ। यो रेल अत्याधुनिक भवनको ५ औं तला भएर गुड्नेछ। यसको स्टेशन रानीपोखरी कम्प्लेक्स, पुरानो बसपार्क, नेपाल एअरलाइन्स अगाडि र विश्वज्योति हल अगाडि रहनेछ। यो मोनोरेल बृहद रानीपोखरी भित्र मात्र चल्ने छ। मोनोरेललाई हामीले भ्यु पोइन्टको रुपमा बुझ्न सक्छौं। यो मोनोरेल चढ्दा बृहद रानीपोखरीका हरेक संरचनाको अवलोकन गर्न सकिन्छ।
अहिले हेर्नुस् त संसारभरी टावर भेटिन्छ।दुबइको बुर्ज खलिफा, टोकियोको स्काइ ट्रि, गोन्जाओको क्यान्टन टावर, टोरन्टोको सिएन टावर, मलेसियाको केएल टावर, फ्रान्सको आइफेल टावर लगायत २ सय ५० मिटरभन्दा अग्ला टावर नै संसारमा ५९ वटा छन्। २ सय ५० मिटरभन्दा साना टावर त कति कति। अनि हाम्रोमा चैं एउटा धरहरा थियो, त्यसको नि रामनाम सत्य भयो। त्यसैले अब त्यो धरहरा भएकै ठाउँमा बृहद रानीपोखरी अन्तर्गत रानीपोखरी टावर निर्माण गर्नुपर्छ। यो टावर पनि अत्याधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स सहितको टावर हुनेछ। प्रतिमिनेट ५० मिटरको गतिमा कुद्ने एलिभेटरसहितको यो टावर ५२० मिटर अग्लो हुनेछ। धरहराकै आकारमा निर्माण हुने यो टावर संसारकै अग्ला टावर मध्येको पाचौं अग्लो टावर हुनेछ। कति सगरमाथा, बुद्ध भन्दै बस्ने अब पनि हामी? त्यो पनि कहिले भारतले मेरो भन्या छ कहिले चाइनाले मेरो भन्या छ। अब हामीले हाम्रो मौलिक, कसैले दाबी गर्न नसक्ने आफ्नै रानीपोखरी टावर बनाउनुपर्छ।
यसरी हामीले अब रानीपोखरीलाई कुनै राजाकी श्रीमती रोएर जम्मा भएको आँशुले बनेको पोखरीका रुपमा नराखेर आधुनिक जमानाको अत्याधुनिक नमुना रानीपोखरीका रुपमा विकास गर्नुपर्छ। कतै कसैले लेखेका थिए, रानीपोखरी साँस्कृतिक सम्पदा मात्र हैन, यो सभ्यता हो। हो, हामीले अब रानीपोखरीबाट नयाँ सभ्यताको शुरुवात गर्नुपर्छ। भौतिक सुविधायुक्त उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको संसारकै आश्चार्यजनक संरचनाको रुपमा।
योबाहेक तपाइँहरुलाई अरु केही थप्न मन लाग्या छ र? छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् है।
This entry was posted in प्रविधि, बाह्र सत्ताईस कुरा, मनोरञ्जन and tagged उपमेयर, काठमान्ड, बिध्यासुन्दर, मेयर, रानीपोखरी. Bookmark the permalink.
5 thoughts on “बिद्यानास्… यसरी सुन्दर हुनेछ रानीपोखरी”
Chandana Rajopadhyaya says:
पौडी कम्पिटसन नि गराउनुपर्यो नि त रानिपोखरीमा। अन्तरास्ट्रिय स्तरको।
अनि त्यो अत्यधिक रानिपोखोरी कम्प्लेक्स,क्याफेमा रात्नपार्कमा घाम ताप्दै बदम खाने हैसियतकाले कपको २,३ सयवाला चिया कफि पिउनको लागी के के गर्न पर्ने हो त्यो नि छुटेछ त
त्यस्को लागि रानी पोखरी- रत्न पार्क माथी ओभरहेड कन्स्ट्रक्सन गरेर हरियो घाँस बिच्छ्याएर बदाम पार्क बनाउनु पर्छ।आकाशे पुल को पनि काम गर्ने ।तर चढ्न 100 रुपया टिकट राख्ने अनि माथी गए पछि दिन भरी फ्री वाइफाइ र बदाम। त्यस्को लागि सामाजिक संस्थाहरु प्रायोजन मा ल्याउनु पर्छ।अनि रत्न पार्क को एउटा कुनामा लभ पोइन्ट स्पेशल डेटिङ स्पट बनाउनु पर्छ। 500 को टिकट काटेर गए पछि प्रेम जोडिलाइ फुल प्राइभेसी दिने। बल्ल सबै छताछुल्ल कुरा हरु अर्गनाइज्ड हुन्छन!
अनि एउटा कुनामा चैं 101 ननस्टप खानेपानी धारा राख्नु पर्छ। काठमाण्डौका ठुला र धेरै कमाउने मन्दिर, गुम्बा, गुरुद्वारा,मस्जिद चर्च को प्रायोजनमा। अनि त्याहा लाइन लागेर सवसाधारण ले चाहिए जति पानी थापेर लाने ब्यवस्था हुन पर्छ।
यो सामाजिक कार्य को स्लोगन हुन पर्छ ” पोखरी हो रानी! पाइन्छ फ्री पानी!”
राम्रो कुरा। यस्तो बुद्धि देश चलाउने ठेकेदार हरुलाई आउनु पर्ने हो।